News - China na New Zealand na Tuesday bịanyere aka na nkwekọrịta maka ịkwalite nkwekọrịta nkwekọrịta ahia n'efu na 12 (FTA)
China na New Zealand bịanyere aka na protocol maka ịkwalite nkwekọrịta azụmaahịa ha na-akwụghị ụgwọ afọ iri na abụọ (FTA), nke a na-atụ anya na ọ ga-ewetara ndị ahịa na ndị mmadụ nke mba abụọ ahụ ọtụtụ uru.
Nkwalite FTA na-agbakwunye isi ọhụrụ na e-azụmahịa, ịzụ ahịa gọọmentị, iwu asọmpi yana gburugburu ebe obibi na azụmaahịa, na mgbakwunye na mmelite na iwu nke mmalite, usoro omenala na mmezi azụmaahịa, ihe mgbochi teknụzụ maka azụmaahịa na azụmaahịa na ọrụ. Na ndabere nke mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta akụ na ụba mpaghara, China ga-agbasawanye mmeghe ya na ngalaba gụnyere ụgbọelu, agụmakwụkwọ, ego, nlekọta ndị agadi, na njem njem na New Zealand iji bulie azụmahịa na ọrụ. FTA kwalite ga-ahụ mba abụọ mepere ahịa ha maka ụfọdụ osisi na akwụkwọ.
New Zealand ga-agbada ọnụ ụzọ ya maka nyochaa ego ndị China, na-enye ya ohere ịnweta otu nyocha ahụ nyocha dị ka ndị otu nkwekọrịta Comprehensive na Progressive for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
O mekwaala okpukpu abụọ maka ndị nkuzi Mandarin Chinese na ndị nduzi njem nleta China na-arụ ọrụ na mba ahụ na 300 na 200, n'otu n'otu.
Ọnọdụ akụ na ụba nke United States butere 3.5 pasent na 2020 n'etiti COVID-19 ọdịda, mbibi kwa afọ nke nnukwu ngwaahịa ngwaahịa US (GDP) kemgbe 1946, dị ka data nke Ngalaba Azụmaahịa US wepụtara na Tọzdee.
Ego atụmatụ na GDP maka 2020 bụ nke mbụ dị otu a ebe ọ bụ na ọdịda 2.5% dara na 2009. Nke ahụ bụ ndaghari kachasị njọ kwa afọ ebe ọ bụ na akụ na ụba belatara 11.6% na 1946.
Ihe omuma a gosiputara na onodu aku na uba nke United States toro na onu ogugu nke 4 pasent na uzo nke ano nke 2020 n’etiti onu ogugu na COVID-19, jiri nwayọ karịa 33.4 pasent na nkeji gara aga.
Ọnọdụ akụ na ụba dabara na ndaba na February, otu ọnwa tupu Healthtù Ahụ Ike declaredwa kwupụtara Covid-19 ọrịa na-efe efe.
Ọnọdụ akụ na ụba nwetara nkwekọrịta na ndekọ post-Depression 31.4% na nkeji nke abụọ wee laghachi na uru 33.4% na ọnwa atọ na-esote.
Nkwupụta nke Thursday bụ atụmatụ mbụ nke Ngalaba Azụmaahịa na-eto maka nkeji iri na ise.
"Mmụba nke anọ nke GDP gosipụtara mmụba akụ na ụba na-aga n'ihu site na mbelata dị njọ na mbido afọ ahụ na mmetụta na-aga n'ihu nke ọrịa ọrịa COVID-19, gụnyere mgbochi na mmechi ọhụụ nke metụtara na mpaghara ụfọdụ nke United States," ngalaba kwuru na nkwupụta.
Agbanyeghi mmụba akụ na ụba na ọkara nke afọ gara aga, akụ na ụba US wedara 3.5 pasent maka afọ dum nke 2020, ma e jiri ya tụnyere mmụba nke 2.2 pasent na 2019, dị ka ngalaba ahụ si kwuo.
Post oge: Apr-29-2021